INethiwekhi esebenzayo kunye neVirststyle: uLawulo lwaBathathi-nxaxheba kunye nokuThengisa | Martech Zone
Inethiwekhi esebenzayo Qho ngonyaka kusenziwa ubhaliso phantse kwizigidi ezili-100 nangaphezulu kwe- $ 3B kwiintlawulo zabaququzeleli abangaphezu kwama-47,000 kunye nemisebenzi engama-200,000 nemisitho.
I-ACTIVE Network® yeyona ndawo ikhokelayo kwindawo yentengiso yemisebenzi kunye neminyhadala, edibanisa abathathi-nxaxheba kunye nabaququzeleli bemisebenzi, ngelixa ibonelela ngobukrelekrele beshishini obungenakuthelekiswa nanto ngezisombululo zethu zedatha ekhokelela kwimizi-mveliso kunye neqonga lokuqonda elinceda abaququzeleli baqhube inxaxheba eyandayo kunye nengeniso.
Uluhlu lwezisombululo zazo zibandakanya amaqonga kunye neenkonzo:
IMISEBENZI Esebenzayo - iqonga lefu elinokutsha. Ikhuselekile, izinzile, kwaye ibhetyebhetye, IMISEBENZI Esebenzayo ibonelela ngeenkonzo kunye nezixhobo zokuxhasa imibutho nabuphi na ubungakanani.
Umsebenzi weLifu -Ubonelela ngemeko yedatha yobukrelekrele. Isisombululo esinegama elikuvumela ukuba uhambise unxibelelwano olusebenzayo kubathengi bakho ngelixa ulandela ukubandakanyeka kwabo, okwenza ukuba kuqondwe nzulu ukuba bafuna ukuva phi, nini kwaye njani.
Ukuzibandakanya Isisombululo esineempawu zesiko esikuvumela ukuba uhambise unxibelelwano olusebenzayo kubathengi bakho ngelixa ulandela ukubandakanyeka kwabo, okwenza ukuba kuqondwe nzulu ukuba bafuna ukuva phi, nini kwaye njani.
Mobile Apps -Uluhlu lwezisombululo zomsebenzi weselfowuni eziyilelwe ukubandakanya abasebenzisi bokugqibela abathatha inxaxheba kwimisitho.
Iinkqubo zexesha lokubaleka Izisombululo zexesha leRFID zobuhlanga bazo zonke ubukhulu (TUHF)
Izisombululo zenethiwekhi ezisebenzayo
Isoftware yoLawulo lobuhlanga Ukubhaliswa kobuhlanga kwi-Intanethi kunye nezisombululo zokuthengisa ukunceda abathathi-nxaxheba abaninzi, ukulawula imicimbi ngokulula, kunye nokwakha uphawu olomeleleyo.
Isoftware yoLawulo loLonwabo -I-ACTIVE Net inceda amasebe epaki nolonwabo, iiYMCAs, amaziko ekhampasi kunye nezinye iindawo zomsebenzi woluntu zonyusa ukuthatha inxaxheba ngokulawula ubhaliso, ukubhukisha, iishedyuli, izibonelelo, ukungena kwindawo, ubulungu kunye nokunye.
Isoftware yoLawulo lwangaphandle IMISEBENZI EQHELEKILEYO ihambisa ukuthotyelwa kunye nokukhuselwa kweendawo zeenkampu, ii-marinas, iindawo ezinembali, izixhobo zokusebenzisa imini kunye neelayisensi zonyaka ezinje ngokuzingela, ukuloba kunye nokuhamba ngesikhephe.
Isoftware yoLawulo lweNkampu Umphathi wekampu ugcina iinkampu ziqhuba kakuhle, kubandakanya neeklinikhi zezemidlalo, iiklasi zobugcisa, iinkqubo zemfundo, nazo zonke iintlobo zeenkampu, emini okanye ebusuku. Yakha iifom zobhaliso ezikwi-Intanethi ngokukhawuleza, yongeza ukuhlawulwa okukhuselekileyo, ukuhlawula iindleko kusapho kunye nokubeka iliso kwizixhobo zedashboard zokunika ingxelo.
Isoftware yoLawulo lwezeMidlalo -Qhuba iiligi ukusuka kwinkqubo enye ye-Intanethi- kubandakanya iiligi, imibutho, iiklabhu kunye nemibutho yolawulo yesizwe yolutsha kunye nemidlalo yabantu abadala. Isoftware yezemidlalo esebenzayo isebenza ngokulula kwaye ilawula ubhaliso lwabadlali, iintlawulo, iirosta, ukugaywa kwevolontiya, ukucwangciswa komdlalo, ukunika ingxelo kunye nokunxibelelana nge-imeyile.
Isoftware kunye noLawulo lweSoftware -Udityaniso lwetekhnoloji ye-Intanethi kunye neyendawo ekuyo yeentaba ze-ski kunye neendawo zokuchithela iiholide, iimyuziyam, i-aquariums kunye neepaki zokuzonwabisa. Qhuba ukusebenza okungcono ngenqaku lentengiso, ulawulo lwesivuno, ubulungu, kunye nezixhobo zokutya neziselo.
Inkampu kunye noMphathi weKlasi yeyokuba ootitshala nabalawuli bafuna ubhaliso lweklasi ekwi-intanethi kunye nentlawulo, unxibelelwano kunye nengxelo yedatha, kunye nenkxaso yolawulo lweklasi. Sebenzisa isisombululo se-ACTIVE sentlawulo kunye nolawulo kwizikolo.
Umdibaniso wentengiso yeViralstyle
UMSEBENZI WENKQUBO Usebenzise inkqubo yokubhalisa kwi-intanethi kunye Intsholongwane, ukunceda imicimbi ukuqhuba ingeniso yorhwebo. Ukulandela umkhondo wentengiso yokuthengisa kunye nokuhambisa ulwazi lwedatha ukunceda abaququzeleli babone ingeniso yabo eyandisiweyo njengesiphumo sentengiso yokuthengisa, eya kuthi incede abaququzeleli benze izigqibo kwimicimbi yabo yexesha elizayo.
Abaququzeleli bemisitho abasebenzisa inqaku lokuthengisa banokukhetha ngaphezulu kwe-20 yeempahla kunye nezinto ezinokukhethwa. Umdibaniso uvumela abathengi ukuba balayishe uyilo olwenziwe ngokwezifiso, ilogo, isicatshulwa, kunye nokukhethwa kombala ukwenza ukuba abathathi-nxaxheba bakwazi ukuthenga into eyenzelwe wena.
Njengengxenye yokuzibophelela kwe-ACTIVE ekuhambiseni izisombululo zolawulo lomjikelo opheleleyo wemicimbi, siye sazisa eli nqaku lokuthengisa ukuze abaququzeleli bakwazi ukugxila ixesha elininzi ekuthatheni abathathi-nxaxheba babo ngamava omnyhadala kunye nexesha elincinci kuthengiso kunye nokuzalisekiswa kwempahla. USam Renouf, umphathi jikelele wezemidlalo kwi-ACTIVE Network
Ukubhengezwa: uLawulo lwaBathathi-nxaxheba, IMISEBENZI ESEBENZA luphawu lwentengiso olubhalisiweyo lwenethiwekhi esebenzayo.
tags: ii -apps ezisebenzayo zeselfowuniinethiwekhi esebenzayoilifu lomsebenziisoftware yolawulo lwenkampuumphathi wekampuizisombululo zolawulo lweklasiumphathi weklasiumphathi weklasiIdatha yomsithoubhaliso lomsithokuzalisekamerchMerchandiseapps mobileintlawulo onlineubhaliso lwesikolo kwi-Intanethiulawulo lwangaphandleIsoftware yolawulo lwangaphandleulawulo lokuthatha inxaxhebaulawulo lomdyarhoisoftware yolawulo lomdyarhoizisombululo zokubalekaulawulo lolonwaboisoftware yolawulo lolonwaboisoftware yolawulo lweeholideRFIDulawulo lwezemidlaloisoftware yolawulo lwezemidlaloTUHFyintsholongwane
Uyenza njani into yokuZenzekelayo ukuHamba kokuSebenza kwakho kuKwandiswa kweMveliso
Ngokukhawuleza: Kutheni iNtsebenzo ingundoqo kwi-Smart Marketer